गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १७ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको कैलाश विकास बैंकको चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा रू. २७ करोड ४६ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ५२ करोड छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ९३ करोड ६८ लाख छुट्याएको छ । कम्पनीले ८८ ओटा शाखा कार्यालय र ३१ ओटा एटीएमहरूबाट बैंकिङ सेवा सुविधा दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रूपमा स्थापित गर्न शाखा नपुगेको स्थानमा र ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने कम्पनीको आगामी योजना रहेको छ । व्यावसायिक लगानीलाई विविधीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्ने कृषि ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने योजना पनि छ ।
2019-04-08 - 107 view(s) - abhiyan